Yohane 1 NA-TWI - Hann a ɛwɔ sum mu - Ansa na - Bible Gateway
Luka 24Yohane 2
Yohane 1 Nkwa Asem (NA-TWI)
1 Ansa na wɔrebɛbɔ wiase no, na Asɛm no wɔ hɔ dedaw. Na Asɛm no ne Onyankopɔn na ɛwɔ hɔ. Na Asɛm no yɛ Onyankopɔn. 2 Mfitiase no, na Asɛm no ne Onyankopɔn na ɛwɔ hɔ. 3 Ɛnam ne so na wɔbɔɔ ade nyinaa. Wɔankwati no anyɛ biribiara. 4 Ne mu na nkwa wɔ; na saa nkwa no na ɛma nnipa hann. 5 Hann no hyerɛn wɔ sum mu a sum no ntumi nni hann no so.